IFama yeSerenity Mini kunye neKhaya leKhenketho
Ukuzola okucocekileyo kuMlambo iVernon. Yiza ukonwabele ukuhlala kwifama yethu encinci kwaye uphumle nezilwanyana zethu. Vuka uye emlanjeni omhle kwaye uzive ukuzola. Amahashe ethu ama-6, idonki encinci, iibhokhwe ezincinci ezi-6, kunye neegusha ezi-2 ziyakuthanda ukuhoywa kwaye unokuziva ubunzima bobomi bemihla ngemihla bushiya umzimba wakho xa uvumela izilwanyana zethu zikuncede uphumle. Sikwanayo nomvundla, iikiti ezininzi, kunye nezinja ezininzi ezinobubele. Umgangatho wethu ujonge umlambo kwaye uneyona mbono imangalisayo yokutshona kwelanga.
Ikhaya lam leholide linamagumbi okulala ama-3 (iibhedi ezimbini zookumkanikazi enye ephindwe kabini) kunye nebhedi kwaye inokuhlala abantu abasi-7. Inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kuzo zonke iimfuno zakho zokupheka kunye ne-BBQ kumngangatho. Inendawo enkulu yokuzonwabisa ene-tv kunye nemidlalo emininzi kunye neencwadi ezinokonwaba. Kukwakho nendawo yeofisi yokufumana naziphi na iindwendwe zomsebenzi weshishini ezinokuba nazo.
Ikhaya lam leholide likwimizuzu eli-15 empuma yeCharlottetown kunye nemizuzu eyi-15 ngasentshona yeMontague. Ikhaya likuPoints East Coastal Drive. Kukho ivenkile gabalala/ivenkile yotywala engaphantsi kwemizuzu eli-10 kude. Ikhosi yeGalufa yaseBelfast Highland yimizuzu eli-15 ezantsi kwekhaya kwaye yenye yezona ndawo zintle zegalufa kwi-PEI. Ikhosi yeGalufa yaseAvondale ikwimizuzu eli-10 kuphela. I-Orwell Corner Historic Village yimizuzu emi-5 kude.
Ndiya kuba lapho ukuze ndamkele zonke iindwendwe kwaye ndiza kubonelela ngokhenketho lwekhaya kunye nepropathi xa ndifika. Ndiyafumaneka ukubonelela ngoncedo kwaye ndiphendule nayiphi na imibuzo onokuba nayo malunga nepropati okanye ummandla nangaliphi na ixesha.
Ndiya kuba lapho ukuze ndamkele zonke iindwendwe kwaye ndiza kubonelela ngokhenketho lwekhaya kunye nepropathi xa ndifika. Ndiyafumaneka ukubonelela ngoncedo kwaye ndiphendule nayi…